Budata Wise Care 365 maka Windows
Budata Wise Care 365
Free Budata maka Windows (16.80 MB)
Budata Wise Care 365,
Mmemme Wise Care 365 bụ mmemme na -arụzi mmezi iji mee ntọala ndekọ kọmputa gị, diski na ngwaọrụ sistemụ ndị ọzọ nụzọ kacha arụ ọrụ. Ị nwere ike iji mmemme a, nke dị nfe iji, welie arụmọrụ kọmputa gị nke ọma.
Budata nlekọta amamihe 365
Na -echebe sistemụ gị na ozugbo - Mee ihe ozugbo mgbe ụfọdụ ngwa na -anwa ime mgbanwe na -enweghị ikike gị. Onye nchekwa a na -achọpụta ma kwụsị usoro ọ bụla na -anwa ịgbanwe ndekọ Windows na nzuzo. Ọ na -egbochi ịgbanwe ebe obibi nke ihe nchọgharị ịntanetị gị. Na -egbochi ngwa ọhụrụ achọghị ịtinye na mbido Windows. Ọ na -egbochi mgbanwe na ihe nchọgharị ndabere.
Ihe nhicha PC zuru oke (emeziwanye) - Nlekọta amamihe 365 bụ mmemme nhọrọ maka ijeri ndị ọrụ Windows chọrọ idobe kọmputa Windows ha na arụmọrụ kacha elu. Ọ na -eme kọmputa ngwa ngwa ma na -atọhapụ ohere diski ike na sekọnd. Ị na -ewepụ ndenye ndekọ Windows na -adịghị mma, na -akwado ma weghachite ndekọ Windows nụzọ dị mfe. Ọ na -ehicha faịlụ nwa oge Windows, na -asacha ihe nchọgharị (Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari na ndị ọzọ), cach, nbudata akụkọ ihe mere eme, akụkọ nchọgharị, kuki, okwuntughe. Nlekọta amamihe 365 na -asachapụ ụzọ mkpirisi na -adịghị mma, faịlụ junk nke ngwa ndị ọzọ mepụtara. Na -enyocha sistemụ niile iji hichaa faịlụ nwere ndọtị ụfọdụ.
Ngwá Ọrụ Njikere Sistemu Ngwa ngwa ngwa nụwa - Wise Care 365 na -eji teknụzụ kachasị mma nụwa. Ọ na -eme ka arụmọrụ PC dị mma, diski diski na ndekọ Windows, yana jikwaa usoro mmalite yana ọrụ. A ga -ejikọ draịvụ diski kọmputa gị na ndekọ ya ka oge na -aga. Amamihe Nlekọta 365 na -erigbu onye ọkwọ ụgbọ ala na ndekọ ya iji dozie ya, na -eme ka kọmputa gị na -agba ọsọ ngwa ngwa. Ọtụtụ mmemme na -agba nkịtị nime okirikiri mgbe ịmalitere kọmputa gị. Amamihe Nlekọta 365 na -enyere gị aka gbanyụọ mmemme na -adịghị mkpa nke na -eri akụrụngwa sistemụ ma na -abawanye ọsọ mmalite kọmputa.
Ihe Nlekọta Nzuzo Kọmputa Kachasị - Nlekọta amamihe 365 na -echebe nzuzo nke kọmputa gị ka ọ ghara ịhụ anya. Eraser Nzuzo na -ehichapụ ihe niile dị na kọmpụta ọ bụla dị ka akụkọ nchọgharị na faịlụ enwetara, yabụ ọrụ kọmputa ọ bụla ị na -eme ga -abụ nkeonwe. Disk Wiper na -egbochi ka ndị ọzọ weghachite data ehichapụ. Disk Shredder na -ehichapụ faịlụ ka enweghị ike weghachite ha.
Sistemụ ike dị ike yana ngwa nlekota akụrụngwa - sistemụ nyocha na -egosipụta ozi niile dị na kọmpụta gị. Nyochaa usoro na -enye ndị ọrụ ndepụta doro anya na ahaziri nke usoro niile onye ọrụ na sistemụ gburu, ndị ọrụ nwere ike mechie usoro ọ bụla ha na -adịghị mkpa iji mee ka kọmpụta na -arụ ọrụ nke ọma. Nchịkọta ngwaike na -enye ndị ọrụ ozi dị nkenke na nkọwa zuru oke gbasara akụrụngwa akụrụngwa niile dị mkpa, na -enye ndị ọrụ ohere ịma banyere kọmpụta ha notu nlele. Sistemụ arụmọrụ, atụmatụ Windows (ụdị, ụdị, ụbọchị nrụnye, wuo), ụbọchị, usoro wdg. Ọ bụ taabụ agbakwunyere ọhụrụ nke na -egosipụta nchịkọta nkọwa Windows dị ka
Wise Care 365 Ụdịdị
Nha faịlụ: 16.80 MB